Ka Kingston Flash Drive in 3 ka soo kabsado Data
> Resource > Flash Drive > Kingston Flash Drive Recovery: Ladnaansho Xogta laga Kingston Flash Drive in 3 Talaabooyinka
Waxaan ka My Kingston USB Flash Drive 8GB soo kaban karto, Data?
Wax dhibaato ah la Kingston flash drive. Markii aan u xiran la computer Windows XP, waxaa loo aqoonsaday by my computer, laakiin anigu ma aan furi karaa. Waxaan leeyahay sawiro muhiim ah oo badan waxa ku jira. Ma suroobi karaa waddo si ay u soo ceshano?
Haddii aad isku dayday in aad flash drive Kingston la computer kale oo aan la furay ma, formatting aad flash drive noqon lahaa go'aan wanaagsan. Ka hor inta aadan go'aansan in qaab aad Kingston flash drive, waxaad ka heli kartaa Kingston software kabashada flash drive inuu ka soo kabsado files ka Kingston flash drive.
Halkan waxaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. No arrin aad xogta Kingston flash drive lumay ay sabab u tahay formatting, dhibaato nidaamka ama tirtirka shil ah, ay si sahal ah baxey karo barnaamijkan. Barnaamijka waxaa la socon kara labada Windows computer iyo Mac.
Hel version tijaabo ah Wondershare Data Recovery iyo bilowdo dib u soo kabashada hadda
Faylal ay ka soo kabsadaan Kingston Flash Drive in 3 Talaabooyinka
Waxaan ku tusi doona sida inuu ka soo kabsado files ka Kingston flash drive la Windows version of Wondershare Data Recovery. Wixii user Mac, waxaad isticmaali kartaa version Mac in ay gaarto wax ku talaabooyin la mid ah.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada si loo farsameeyo soo kabashada ah
Ka hor inta Wondershare Data Recovery la bilaabay, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad Kingston flash drive la your computer.
Kadib markii ay barnaamijka, waxaad arki doontaa daaqad bilowga bixiya 3 hababka soo kabashada. Halkan aynu dooro "lumay File Recovery" mode.
Tallaabada 2 Dooro warqad drive ee aad Kingston flash drive in iskaan xogta laga badiyay
Suuqa kala Barnaamijku wuxuu ugu dhakhsaha badan ku taxan doono drives oo dhan adag on your computer, oo ay ku jiraan qalabka kaydinta. Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah si aad u Kingston flash drive oo guji "Scan" in iskaan xogta lumay.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad hesho natiijo iskaanka fiican, waxaad go'aansan kartaa in "Enable Deep Scan", laakiin raagto in ka badan scan caadiga ah.
Tallaabada 3 Ladnaansho helay files eegista
Marka scan ka baxayo, ku jira oo dhan ka helay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha ama waddooyinkiisa. Waxaad iyaga ku hubin kartaa mid mid si ay u arkaan in files doonayo waxaa la helay ama aan. Plus, haddii aad xusuusan magaca faylka, aad ka raadin kartaa in baadi bar.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya in your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro gal ah in aad computer in ay sii faylasha. Waxay keeni lahaa in xogta overwritten haddii aad iyaga ku badbaadin si aad Kingston flash drive si degdeg ah ka dib markii dib u soo kabashada.
USB Unformat: Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB formatted
Tallaabada hagitaan talaabo talaabo si ay xijaab flash ah
Recovery transformer USB Drive - Ladnaansho Faylal ay ka transformer USB Drive